"Ny Zanak’olona (Jesosy) tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro." Matio 20:28
"Andriamanitra … nanangana Azy tamin’ny maty ka nanome voninahitra Azy." 1 Petera 1:21
Ny Zanak’Andriamanitra dia nanafoana ny tenany ka nitafy nofo, mba hanatonany ny olona sy hamonjeny azy. Ny fiainany manontolo dia nampiseho ny toetran’Andriamanitra: fitiavana, fahazavana, hatsaram-panahy, fangoraham-po…, toetra mba tian’Andriamanitra ho hita teo amin’ny olombelona. Mifanohitra tanteraka ny toetra amam-panaon’i Jesosy sy ny antsika!
- Isika mitady izay maha metimety ny fiainantsika. Jesosy teraka tao an-tranon’omby ary tsy nanana trano fonenana raikitra.
- Isika mikatsaka harena sy voninahitra. Jesosy nisafidy ny hiaina tao anaty fahantrana sy fanetrentena.
- Isika te ho hita miaraka amin’olona manan-daza. Jesosy, talohan’ny zava-drehetra, dia nikarakara ireo fadiranovana sy ireo naratran’ny fiainana.
Notsahivin’ny apostoly Petera ny fiainan’i Kristy, “Izay tsy nanota akory, sady tsy nisy fitaka teo am-bavany ; raha notevatevaina Izy, dia tsy mba nanevateva; raha nijaly, dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny adiny ho amin’ny Mpitsara marina” (1 Petera 2:22-23). Izany fihetsiny izany dia vao mainka nampibaribary ny haratsin’ny an’ny olona. Koa nolavina Izy, ary novaliana haratsiam-panahy ny fitiavany: nohomboana teo amin’ny hazofijaliana Izy.
Teo amin’ny hazofijaliana no niharihary indrindra ny fifanoherana. Nitroatra nankahala Azy ny olona rehetra, fa niseho kosa ny haben’ny fitiavan’Andriamanitra, fitiavana lalina sady tsy misy fetra, miantefa amintsika olona maharikoriko: nentin’i Jesosy tamin’ny tenany ny famaizana ireo fahotantsika, famaizana ireo faniratsirantsika an’Andriamanitra.